सलमान बलिउडमा डेब्यू गरेको ३० वर्ष पूरा ! – Everest Dainik – News from Nepal
सलमान बलिउडमा डेब्यू गरेको ३० वर्ष पूरा !
एजेन्सी । भारतीय स्टार अभिनेता सलमान खानले बलिउड उद्योगमा छिरेको ३० वर्ष पूरा गरेका छन् । तीन दशकमा उनले सुपरस्टार मात्रै होइन बलिउडमा गड फादरको पहिचानसमेत बनाइसकेका छन् ।
सन् २०१० मा प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘दबंग’ सलमान खानको कयिरको टर्निङ पोइन्ट बन्यो । फिल्म ‘दबंग’ ले सलमानलाई बलिउड फिल्म उद्योगमा निकै उचाइमा पुर्यायो । आठ वर्ष यता देखि सलमान खानको फ्लप फिल्मले पनि बक्स अफिसमा एक सय करोडको आम्दानी सजिलै पूरा गर्दै आइरहेको छ । सलमान खानले बलिउड फिल्म उद्योगमा सुल्तानको उपाधि हासिल गरेका छन् ।
ट्याग्स: ३० वर्ष पूरा, Salman khan, बलिउड, सलमान खान